विगतले दिलाएको साखलाई पनि जोगाउन असमर्थ फुटबल नेतृत्व « KhelkudNews.com
विगतले दिलाएको साखलाई पनि जोगाउन असमर्थ फुटबल नेतृत्व
Published On : 13 February, 2021 4:09 pm
नेपाली फुटबलको लामो कालखण्डमा भिन्न भिन्नै परिस्थिति देखियो । धेरै अगाडीको कुरा होइन, यहाँ केही दशक अगाडीका कुरा मात्र जोडिएका छन् । पुरुषोत्तम लाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको फुटबल सङ्घ सामान्य थियो । हुन सक्छ, प्रदर्शन हालको भन्दा स्तरीय होस् । तर सामान्य यो अर्थमा हो कि, कार्यालय संरचना , पुरस्कार राशि र प्रतियोगिताको संरचनाको हिसाबले फुटबलको प्रभाव त्यत्ति थिएन। । जत्ति त्यस पछि भयो ।
श्रेष्ठ कार्यकाल पछि गणेश थापाको कार्यकालको सुरुवात नेपाली फुटबलमा सधैँ चर्चामा रहने गरेको छ । विवाद, दुई फुटबल सङ्घ, सञ्चार माध्यममा प्रभाव, ठुला कर्पोरेट हाउस र व्यापारी घरानाको फुटबलमा चासो । यसका साथ फुटबलकर्मीका सुविधा र अवसर सबै किसिमले थापा कार्यकाल चर्चामा थियो । यसो भन्दा पनि हुन्छ, नेपाली सङ्घ अध्यक्ष मध्य सबै भन्दा आलोचना पनि सायद गणेश थापाको भयो । सबैभन्दा प्रशंसा पनि गणेश थापाको भयो । यस कारण भयो की थापा कार्यकाल सक्रिय थियो यस कारण आलोचना र प्रशंसा यसै कार्यकालमा धेरै भयो ।
थापा कार्यकालमा नेतृत्वका थुप्रै कमजोरी पनि थिए । सङ्घ अध्यक्ष नै झनक्क रिसाउने, टेम्पर गुमाउने लगायत कमजोरीका कारण बारम्बार आलोचित रहे । साँचो के हो भन्दा यो पनि बढी आलोचना राजनीतिक कारणले पनि सञ्चार माध्यममा भयो होला । गणेश थापा फिफा अनुशासन समितिको सदस्य हुँदा होस या एएफसीको उपाध्यक्ष हुँदा जत्ति स्थान दिइनु पर्ने हो, त्यो दिन कन्जुस्याइँ भिन्न सञ्चार माध्यममा भए होलान् । यसको नितान्त एउटै कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि हुन सक्छ ।
यी सबै कुराको मतलब यो होइन की गणेश थापा आलोचना गर्न लायक नै थिएनन् । उनमा थुप्रै कमजोरी थिए । महत्त्वपूर्ण कुरा हाल प्रतिबन्ध सहे पछि उनको कमजोरीको बारे चर्चा गर्नु त्यत्ति आवश्यक नहोला । हाल उनी नेतृत्वमा छैनन् । तसर्थ उनका कमजोरी भन्दा उनले दिलाएका सफलतालाई र सकारात्मक विषयलाई यो नेतृत्वले निरन्तरता दिन सक्यो की सकेन भन्ने नेपाली फुटबलमा आज उठाइनु पर्ने विषय हो ।
थापा कार्यकालमै नेपाली फुटबल सानो कोठाबाट सात दोबाटोको सेतो घरमा पुगेको यथार्थ हो । त्यो सेतो घर जस्तै कुने थप संरचना बन्यो की बनेन ? थापा कार्यकालमा नेपाली कर्पोरेट उद्योगहरू एकाएक फुटबलको दुनियाँमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यो क्रम कत्ति बढेको छ ? यो आज पनि उठान गर्नै पर्ने विषय हो ।
सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपाली फुटबलकर्मीको जुन सान छ , त्यो झरेको छ या उठेको छ ? यो पनि आजको प्रश्न हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली नेतृत्वको व्यक्तित्वको कारण कुनै फुटबलकर्मी जत्ति सानले प्रस्तुत हुने गरेका थिए आज त्यो छकी छैन । नेपालमा केही राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता सिफारिसमा थुप्रै निर्णय भएका देखिए । अन्य सामान्य शक्ति केन्द्रको इशारामा पनि निर्णय भएको देखियो । सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ की, नेपालको सामान्य राजनीतिकर्मीले फुटबल सङ्घलाई प्रभाव पार्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के होला ? नेपाली फुटबललाई कसरी हेरिन्छ ?यस्ता थुप्रै बहसका विषय छन् । सायद अबका केही महिनामा यी सबै छताछुल्ल हुने छन् ?